people Nepal » रामेश्वर खनाल र बाबुराम भट्टराईः को ठीक को गलत ? रामेश्वर खनाल र बाबुराम भट्टराईः को ठीक को गलत ? – people Nepal
१७ चैत, काठमाडौं । नयाँशक्ति पार्टी परित्याग गरेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र सो पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई दुबैको चरित्र चित्रण सोही पार्टीका ‘कृषक नेता’ मदन राईले गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा राईले ‘दुई सिपालु नेपाली आत्मा’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् । सो लेखमा राईले भनेका छन्- ‘नयाँ शक्तिमा यी दुई आत्मा एक ठाउँमा भए, म बूढो हलीको हलो यसमा गज्जपले जोड्ने थिएँ भनेर यिनी दुबैलाई भनेको हुँ ।’
नयाँ शक्ति पार्टी छाडेर हिँडेका रामेश्वर खनालका बारेमा राईले लेखेका छन्-‘खनालजीको बोलाइ, लेखाइ र गराइको तादाम्य र मिठास देखेर म ज्यादै प्रभावित भएको थिएँ । बाबुरामजीको भन्दा अझ सरल र मीठो लाग्छ, खनालजीको शैली । यस्ता मानिस राजनीतिमा आउनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्थें । राजनीतिमा रामेश्वरजीलाई संलग्न गराउन बाबुरामजी र रवीन्द्र मिश्रजीसँग निकै कुरा चल्थ्यो ।उनीहरु दुबै जना र मैले पनि रामेश्वरजीप्रतिको आकर्षण धेरै देख्नेगथ्र्यौं । किनकि उनी असलमात्रै होइन, हामी भएकामध्ये आफ्नो विषयमा धेरै जान्नेमान्छे पनि ।’
राईले लेखेका छन्- ‘नयाँशक्तिको आर्थिक नीति रामेश्वरजीले धेरै मिहेनत गरेर तयार गरेका हुन् । समिट होटलको प्रस्तुतीमा पंक्तिकार खुशीले रोएको थियो । रामेश्वरजीसँग लगातार वर्षदिन काम गर्दा हर्ष र उर्जा मिल्थ्यो । सारै सरल, चोखो र स्पष्ट मान्छे । कञ्चन चामलजस्तै, कलकल छहरा जस्तो विचार र अभिव्यक्ति । साधा जीवन जिउन, पैदन हिँड्न, भुइँमा बस्न रुचाउने ।’
लेखमा राईले थप भनेका छन्- ‘बाबुरामजीलाई अर्थमन्त्रीमा सफल बनाउने मुख्य हात खनालजीकै हो ।’
राईले आफ्नो लेखमा रामेश्वर खनालका कमजोरीबारे पनि लेखेका छन् । रार्इ भन्छन्- ‘रामेश्वरजी पनि मानिस नै हुन् । उनको कमजोरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो कमजोरीमा अधैर्य स्वयं आफैंले भनिसकेका छन् । आफूले भनेको भएन भने सहने कम, मन दुखाउने बढी ।’